GreenKhabar – १८ घण्टा ट्राम चल्ने सुरक्षित झिलिमिली शहर मेरो संकल्प
in आलेख/विचार / दस्तावेज / मूलपेज / हरित वार्ता — by GreenKhabar —	May 3, 2017
तपाईले अव जित्ने आधार चैं के हो ?
लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा पार्टीमा क्रियाशील, जनताबीच स्थापित भएर विभिन्न विकासमूलक र सामाजिक काममा सक्रिय भएको हिसावले र भोलीका दिनमा विकासको भिजन र नेतृत्व दिनसक्ने क्षमता भएको महसुस गरेको छु । मेरो दावी भन्दा मतदाताले जिम्मेवारी दिएपछि थप कामले त्यो दावीलाई सार्थक बनाउने नै छ । हाम्रो पार्टी मूल रुपमा संगठनमा आधारित पार्टी हो । राष्ट्रिय रुपमा नेकपा एमालेको नीति र एजेण्डाका कारण राष्ट्रियता, जनजिविका र विकासको डोरो देखिएको छ । यो कुरालाई आम मतदाता र जनतामाझ लैजाँदा त्यसलाई मतदाताले विश्वास गर्नुुनेछ । त्यसबाहेक यस क्षेत्रका समस्यासंग राम्रोसंग परिचित भएको र आफ्नो भिजन र नेतृत्वले समस्या समाधान गरी सम्भावनाको खोजी गर्ने काममा मैले आफ्नो कार्यक्रम ल्याएको छु । जनताले पहिलो कुरा पार्टीको नीतिलाई हेर्छन् त्यो एमालेको सबैभन्दा राम्रो छ त्यसपछि उम्मेदवारका कार्यक्रम र त्यसको सम्भावनालाई हेर्छन् त्यो मैले प्रष्टसंग भनिरहेको छु हाम्रा कार्यक्रम सम्भावनामा आधारित र अत्यावश्यक योजनाहरु छन् त्यसकारण मेरो विजय निश्चित छ ।
तपाईका योजना चै के के छन् त ?
हामीले यो निर्वाचनमार्फत राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जनतालाई विकासमार्फत समृद्ध र सुखी बनाउन जरुरी छ । हामीले नागरिकहरुलाई समृद्ध बनाउनका लागि पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनेछौं । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका साँघुरा सडकलाई फराकिलो बनाउने, असरल्ल तार र पोलहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अण्डरग्राउण्ड वायर सिष्टम विकास गर्ने, सबै सडकहरुमा सौर्य सडक वत्तीको व्यवस्था गरेर झिलिमिली बनाउने, सुरक्षाका लागि सीसीटीभी र सेक्युरिटि साइरनको व्यवस्था गर्ने लगायतका योजना बनाएका छौं । नागरिकलाई आफूले तिरेको करको सदुपयोग भएको अनुभूती दिलाउने गरी पारदर्शी र झन्झटमुक्त प्रशासनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्नेछौं । करको सदुपयोग र बाह्य लगानी तथा अनुदान भित्र्याउने काम गर्नेछौं । कला संस्कृति, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुलाई पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा विकास गर्नेछौं । नगरभित्रका महत्वपूर्ण वहाल, विहार, पोखरी, ढुंगेधाराहरुलाई संरक्षण र विकास गरेर पर्यटकीय महत्वका क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेछौं । महानगरभित्रको पाटन दरवार स्क्वाएरदेखि हरिसिद्धि, धापाखेल हुँदै खोकना बुंगमती सम्मको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटन क्लष्टरको रुपमा विकास गरेर विदेशी पर्यटकले कम्तिमा महानगरक्षेत्रभित्र ३ दिन बस्ने अवस्थाको सिर्जना गछौं जुन महानगरको विकासको निकै ठूलो स्रोत हो । यसका लागि पाँचतारे होटल स्थापना गर्ने वातावरणदेखि महानगरभित्रका सांस्कृतिक महत्व झल्कने स्थापना कलात्मक घरहरुलाई सम्पदा घर (हेरिटेज होम) संचालनलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।
अवका ५ वर्षमा महानगरलाई चिनाउने के के हुनेछन् ?
६ महिनाभित्र ललितपुर महानगरलाई विभिन्न उपायमार्फत धुवाँ, हिलो र धूलोमुक्त बनाइनेछ । मेलम्ची लगायतका अन्य विकल्पहरुको व्यवस्थापनसंगै खानेपानीको पर्याप्त आपूर्तिसहित १ वर्षभित्र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिनेछ । सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु सहितको एकीकृत विकास सूचना केन्द्र सहितको उच्च प्रविधियुक्त सभाहलको निर्माण हुनेछ । नमूना यातायातको रुपमा कुपण्डोल देखि गोदावरीसम्म ट्राम संचालन गरिनेछ । विद्युतीय परिवहनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । हरेक वार्डमा वालवालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई मनोरञ्जनको लागि पार्क र मनोरञ्जनस्थलहरुको निर्माण गर्नेछौं । महानगरभित्रका सम्पूर्ण पोखरीहरु नौकाविहारका लागि उपयुक्त खालको बनाउनेछौं । महानगरभित्र पर्ने खोलानालाको सफाई गरी किनारामा पार्क निर्माण गरेर सुन्दर महानगर बनाउनेछौं । नगरभित्र विशेष व्यापारिक क्षेत्र निर्माण गरी घण्टाका आधारमा काम गर्ने अवस्था निर्माण गर्नेछौं । युवालाई सीप र स्रोतका आधारमा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउँछौं । एमालेको सेटलाई विजयी गराउने ललितपुरवासीलाई अवको ५ वर्षमा पर्यटकको आगमनले खचाखच भएको २४ घण्टा चहलपहल हुने १८ घण्टा ट्राम चल्ने झिलिमिलीयुक्त सुरक्षित ललितपुर महानगर मेरो संकल्प हो ।